७ बर्षमै दुनिया चकित पार्दै यि सानी नानी, जसलाई देखेपछि तपाई छक्क मात्रै होइन कसरी यस्तो गर्न सक्छिन् भनेर १ पटक सोच्नुहुनेछ « गोर्खाली खबर डटकम
तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ त ? ७ बर्षको उमेरमा के गर्न सकिन्छ भनेर, हामी सजिलै भन्छौ खेल्ने, खाने, पढने इत्यादि भनेर । तर हामी सबैले केही समय अघि एक जना सानी नानीको जादूमय स्वर र लाइभ दोहोरी सुनेका हेरेका र जाताततै प्रशंसाले भरिपूर्ण भएको खबर पनि मिडियामा भाईरल भएको थियो । ति नानी हुन गुल्मी शान्तीपुरकी रबिना बसेल जस्ले देशभर तहल्का पिटेकी थिईन ।
सबै अचम्मीत चकित र आश्चर्यमा थिए यति सानै उमेरमा त्यस्तो कसरी भनेर ? हो आज हामी गुल्मीकै यिनै रबिनाको फेरी अर्को चकित पार्ने आवाजको जादू लिएर आएका छौ । गाउमै बसेर पनि नया पुराना गित र जस्तासुकै गितहरु पनि यसरी सजिलै गाउदा त सबैको होश उडनेनै भयो र लाइभ दोहोरीले त झनै संसारै चकित पार्यो ।
मानिसहरु अझैपनि राम्ररी फेस टु फेस नदेखुन सम्म त बिश्वासै गर्न सक्दैनन । यस्तो नि हुन्छ र ? भनेर । उनै रबिनाकी आमा पनि छोरी भन्दा झन कडा छिन, छोरीले के गाउछिन यस्तो जुन आमाले त त्यसको दोब्बर गाउछिन । हामी पनि हेरेको हेर्यै भयौ । हुन पनि होला बंशाणुगत सर्छ भनेर हामीले पढेको सुनेको र भोगेको पनि ।
त्यही भएर होला सायद यति सानै उमेर ७ बर्षमा पनि दुनिया“ चकित पार्दै सबैको मनमा एउटा आफनो स्थान बनाउन सफल भएकी छिन, हेरौ यि नानीको जादूमय कला ..,